CHII CHINONZI WIFI DIRECT MUKATI WINDOWS 10? - NYORO
Chii chinonzi WiFi Direct mukati Windows 10?
Chii chinonzi WiFi? Iwe uchataura iwo mubvunzo wakapusa kubvunza. Iyo nzira yedata / ruzivo rwekuchinjana pakati pemidziyo miviri kana yakawanda, i.e. imwe mbozhanhare uye imwe kana nharembozha uye Laptop / desktop kuburikidza nekushandisa internet pasina chero tambo yekubatanidza pakati pavo. Nenzira iyi, iwe unoshandisa iyo internet uye vanovimba neyako internet yekubatanidza. Saka kana yako internet yekubatanidza iri pasi, iwe wakadzivirirwa kubva pasirese.
Kuti ukunde nyaya iyi, Windows 10 inopa chinhu chakanakisa chaunogona kugovana mafaera pakati pemidziyo yakasiyana usingashandisi internet. Inenge yakafanana neBluetooth kunze kwekuti inokunda hutera huripo muBluetooth. Iyi sisitimu, iyo Windows 10 inoshandisa, inonzi WiFi Direct nzira.
WiFi Direct, yaimbozivikanwa seWiFi Peer-to-Peer, ndeye standard isina waya yekubatanidza iyo inobvumidza maviri madhijitari kubatana zvakananga pasina iyo WiFi yekuwana nzvimbo, rauta, kana internet semurevereri kana wepakati. Iyo inogovera mafaera pakati pemidziyo miviri pasina kushandisa kweinternet kana chero mutauri.
WiFi Direct inzira iri nyore yekutsvaga zvishandiso munzvimbo yako padyo nekubatana nazvo. Inosarudzwa pamusoro peBluetooth nekuda kwezvikonzero zviviri zvikuru. Kutanga, kugona kwayo kuendesa kana kugovana mafaira akakura uchienzaniswa neBluetooth. Kechipiri, kumhanya kwayo kuri kukurumidza zvakanyanya kana ichienzaniswa neBluetooth. Nekudaro, uchishandisa nguva shoma, munhu anogona kutumira kana kugamuchira mafaera mahombe nekukurumidza achishandisa WiFi Direct. Izvo zvakare zvakareruka kugadzirisa.
Hapana nzira, chero munhu anogona kupokana neBluetooth, asi nekufambira mberi nekukurumidza kweiyo WiFi Direct tekinoroji, zuva racho hariratidzike seriri kure kwazvo parinotora nzvimbo yeBluetooth. Saka, Tichishandisa USB WiFi adapter, tinogona kutsigira Windows 10, Indaneti yezvinhu Core zvishandiso.
Zvekushandisa WiFi Direct, chingotarisirwa ndechekuona kuti iyo USB WiFi adapta inosangana nemaviri anodikanwa mamiriro. Chekutanga, iyo Hardware yeUSB WiFi adapter inofanira kutsigira WiFi Direct, uye chepiri, mutyairi anozogonesa iyo USB WiFi adapter inofanirawo kutsigira WiFi Direct. Zvinoreva kutarisa kuenderana.
Kuona cheki yekuenderana, kugonesa windows 10 PC vashandisi kubatanidza vachishandisa WiFi Direct, unofanirwa kudzvanya Kuhwina + R uye pinda CMD pane yako PC inoteverwa nemurairo ipconfig / zvese . Wadaro, kana kuverenga kuverenga Microsoft WiFi Direct Virtual Adapter inoonekwa paPC skrini, inoratidza kuti WiFi Direct inowanikwa munzvimbo iri pedyo.
WiFi Direct inoregedza vashandisi ve Windows 10 PC, yakabatana nechero imwe kifaa nenzira iri nani uye yakasikwa kupfuura kunyange Bluetooth. Saka unogona kuseta PC yako kuTV kana kuishandisa kugadzira kubatana kweinternet izvo zvakachengeteka uye zvakachengeteka. Asi zvinodikanwa kumisikidza WiFi Direct mukati Windows 10 PC, saka regai isu zvino tione kuti tingazvimisikidza sei.
Iyo modus operandi yeiyo WiFi Direct system yakatwasuka. Chimwe chigadzirwa chinoona chimwe chigadzirwa mumafashoni akafanana nekuwana imwe netiweki. Wobva waisa iyo chaiyo password uye unobatana. Zvinoda kuti kubva pamidziyo miviri yekubatanidza, chinhu chimwe chete chinofanirwa kuenderana neWiFi Direct. Nekudaro, imwe yemidziyo mukuita inogadzira nzvimbo yekuwana senge rauta, uye chimwe chishandiso chinozviswededza icho nekubatana kwachiri.
Kugadzira WiFi Direct mukati mako Windows 10 Laptop, desktop, kana piritsi, nezvimwewo, mubatanidzwa wematanho akati wandei. Padanho rekutanga, chishandiso chinodiwa kuti ubatanidze nePC chinofanira kubatidzwa. Washandura pachigadzirwa, enda kumasefa ekushandisa uye shandisa network yayo neinternet uye sarudza Manage WiFi Zvirongwa.
Mushure mekusarudza Manage WiFi Zvirongwa, iyo Bluetooth uye dzimwe sarudzo dzinozogoneswa, zvichikuita kuti utarise nemenyu yekutarisa WiFi Yakananga sarudzo pane yako kifaa. Pakutsvaga iyo WiFi Direct sarudzo pane chishandiso, gonesa iyo, uye enderera zvinoenderana nemirayiridzo inofambiswa nemuchina. Inorayirwa, kutevedzera kumirayiridzo yechigadzirwa, zviito chaizvo.
Kana iyo WiFi Direct sarudzo yagoneswa, rinodikanwa zita reApple kifaa rinoratidzwa mune iripo runyorwa. Cherekedza pasi iyo SSID, kureva Sevhisi Set Set, iyo isiri chimwe chinhu kunze kwezita reNetwork mune ako akajairwa mitauro yemitauro yakadai seChirungu. SSID inogadziriswa, saka kuti uisiyanise kubva kune mamwe maratidziro mukati nekukutenderedza, iwe unopa zita kune yako isina waya yepamhepo netiweki. Iwe uchaona iri zita kana iwe ukabatanidza chako chishandiso kune yako isina waya netiweki.
Bluetooth sarudzo isipo windows 10
Tevere, iwe unogadza password, inozivikanwa iwe chete, kuitira kuti pasave nemunhu ane mvumo anogona kuiwana. Zvese zviri zviviri zvichemo zvinoda kuyeukwa uye kunyorwa kuitira kushandiswa mune ramangwana. Wapedza kudaro, batidza PC yako, uye pabhawa rekutsvaga tinya Tsvaga uye nyora Wiresi. Mune iyo rondedzero yesarudzo inooneka, tarisa pane Manage Wireless Network, sarudzo.
Mushure mekubaya pa Manage Wireless Network, wobva wadzvanya pa Wedzera uye sarudza iyo WiFi Network yewifi yako Direct kifaa uye isa password. PC yako inozowiraniswa neyako WiFi Direct Network. Unogona kubatanidza PC yako kune chero chishandiso chaunoda uye nekugovana chero data / mafaera sezvaunoda uchishandisa iyo WiFi Direct Network. Iwe unogona zvakare kubatsirwa kubva nekukurumidza isina waya kubatana, kuwedzera kwako kugona kuburikidza nekuwedzera kugadzirwa.
Kuti ubatanidze uye ugovane mafaera zvisina waya, unofanirwa kuona kuti yechitatu-bato app senge Feem kana chero imwe sarudzo yako yakaiswa mune ese mairi, pakati pedu vatinoda kugovana mafaera. Mari yakasununguka kushandisa, uye kushandisa WiFi Direct mu Feem zvakare mahara. WiFi Direct zvakare yakasununguka kushandisa mune mhenyu chat.
Kubva pasoftware inopa WiFi Direct rutsigiro kune vese Windows PC uye Laptop vashandisi. Iyo Iyo inonyanya lite app inogona kutorwa pasi pane ese ari mairi Windows-10 Laptop uye neApple Mobile zvishandiso kubva kuGoogle Store uye uve wakasununguka kutumira kana kugamuchira chero nhamba yemafaira kana data risingamire pakati pezvose zvishandiso.
Maitiro ekushandisa Feem kuendesa data kubva kuApple kuenda kuPc kana Laptop iri nyore uye yakatwasuka sezvakatsanangurwa pazasi:
Enda kuZvirongwa, wozoti network uye internet. Tevere, enda kune hotspot uye tethering uye gadzirisa nharembozha yako seyakatsvaga Android mune yako Android Runhare. Zvino batanidza yako Window-10 PC kune ino network. Inotevera yakavhurika Feem pane Android neWindows, usazovhiringidzika sezvo zvese zvishandiso zvichizopihwa mazita asinganzwisisike uye password, neapp.
Rangarira iyi password kana kuinyora pasi kumwe kunhu kana iwe pawakaisa iyo nyowani yekubatanidza, iwe uchizoda iyi password. Sarudza chishandiso chaunofanira kutumira iyo faira. Bhurawuza faira raunoda uye wobva wadzvanya kuti uritumire. Mushure menguva diki, iwe unenge uine iyo data inotumirwa kunzvimbo inodiwa. Maitiro aya anoshanda munzira mbiri, i.e. kubva kuApple kuenda kuWindows kana zvinopesana.
Nenzira iyo iwe wakabatanidza iyo Android kifaa neWindows PC yako kana Vice Versa uchishandisa WiFi Direct, iwe unogona zvakafanana, batanidza kune yako WiFi Direct inoshanda printer zvakare yekugovana faira nekudhinda uchishandisa PC yako. Chinja pane yako Printer. Tevere, enda kusarudzo ye Printer uye Scanner pane yako PC uye tinya pairi. Iwe unowana kukurumidza Wedzera printer kana scanner , Sarudza uye tinya sarudzo yekuwedzera purinda kana scanner.
Mushure mekukumbira kuwedzera purinda kana scanner, sarudza inotevera sarudzo ku Ratidza WiFi Direct Printa . Uchave nesarudzo dzese dzinoratidzwa. Kubva pane zvinyorwa zvinoratidza mazita eWiFi Direct maprinta padyo, sarudza purinta yaunoda kubatanidza. Iyo WiFi Inodzivirirwa Setup kana WPS Pin inongotumira iyo password, iyo iyo maviri madhivhisi anorangarira kuti ishandiswe mune ramangwana zvakare, kugonesa kubatana kuri nyore uye kwakachengeteka kune iyo WiFi Direct purinda.
Chii chinonzi WPS pini? Iyo yekudzivirira nzira yeasina waya maneti kuburikidza iyo iyo nekukurumidza uye nyore kubatanidza router kune isina waya michina. Iyi pini yeWPS yekumisikidzwa inogona kumisikidzwa chete pane iwo asina waya network ayo anoshandisa password yakanyorwa neWPA nzira dzekuchengetedza. Iyi yekubatanidza maitiro inogona kuitwa nenzira dzakasiyana. Ngatiedzei kunzwisisa nzira idzi.
Uyezve Verenga: Chii chinonzi WPS uye Inoshanda Sei?
Kutanga, pane yako router, pane bhatani reWPS iwe raunoda kudzvanya, uye izvi zvinokugonesa kuti uwane izvo zvishandiso munharaunda yako. Kana wapedza, enda kune yako kifaa uye sarudza kubatana kwaunoda kubatanidza zvakare. Izvi zvinogonesa chishandiso chako kuti chibatanidze otomatiki kunetiweki pasina kushandisa password.
Chechipiri, kuti ubatanidze network yako kune zvigadzirwa zvakaita semaprinta asina waya, nezvimwewo izvo zvinogona kunge zviine bhatani reWPS, unodzvanya bhatani irori uyezve pane gadget yako. Pasina imwezve data yekuisa, WPS inotumira iyo network password, iyo inochengetwa ne gadget yako. Nekudaro, yako gadget / purinda uye yako network network auto-yekubatanidza pese pazvinenge zvichidikanwa mune ramangwana pasina chako chekumanikidza bhatani reWPS.
Nzira yechitatu ndeyekushandisa kwepini ine manhamba masere. Ese maWPS anogonesa ma routers kuve neinomwe-manhamba Pin kodhi iyo isingakwanise kuchinjiswa nechero mushandisi uye inogadzirwa-otomatiki. Mimwe michina isina bhatani reWPS asi iri WPS inogoneswa kubvunza pini ine manhamba masere. Paunenge iwe waisa pini iyi, aya magajeti anozvisimbisa uye anobatana kune isina waya netiweki.
Kubva pasoftware inopa WiFi Direct rutsigiro kune vese Windows PC nevashandisi veLaptop. Iyo Feem lite app inogona kutorwa pasi pane ese Windows-10 Laptop uye neApple Mobile zvishandiso kubva kuGoogle Store uye uve wakasununguka kutumira kana kugamuchira chero nhamba yemafaira kana data risingamire pakati pezvose zvishandiso.
Maitiro ekushandisa Feem kuendesa data kubva kuAndroid kuenda kuPc / Laptop iri nyore uye yakatwasuka sezvakatsanangurwa pazasi:
Mune yako Android Runhare enda kuZvirongwa, Network, uye internet uye padhuze ne hotspot uye tethering uye kumisikidza nhare se Android hotspot pane yako Nhare mbozha. Iye zvino batanidza Window-10 PC yako kunetiweki, Inotevera yakavhurika Feem pane ese Android neWindows. Iyo app ichaendesa pasiwedhi, uye iyo app ichapa mamwe mazita asina kujairika kune ese ako Windows uye Android zvishandiso. Iwe haufanire kuvhiringidzika nemazita aya asinganzwisisike.
Rangarira iyi password kana kuinyorera pasi kumwe kunhu paunogadzira kubatana kutsva, iwe uchazoda iyi password. Sarudza chishandiso chaunofanira kutumira iyo faira / data. Bhurawuza faira raunoda uye wobva wadzvanya kuti utumire iyo faira. Mushure menguva, iwe unozowana iyo faira / dhata inotumirwa kunzvimbo inodiwa. Maitiro aya anoshanda munzira mbiri, i.e., kubva ku Android kuenda kuWindows kana zvinopesana.
Saka tinoona windows 10 inoshandisa WiFi Direct, nzira yekutaurirana isina waya isina internet, kubatanidza yako Nhare zvisina basa nePC yako kana Laptop yako kuPC yako uye zvinopesana. Iwe ikozvino unogona kuendesa makuru machunks e data kana kugovera makuru mafaera kuLaptop yako kubva paPC kana foni yako kuPC.
Saizvozvowo, kana iwe uchida kudhinda faira, unogona kubatanidza yako WiFi Direct inogoneswa PC kana iyo Laptop (ine WiFi yakananga) uye tora chero nhamba yemaprints anodiwa chero faira, kana data rekushandisa kwako.
Iyo Feem software kana iyo Feem Lite App inouya zvakanyanya nyore mukushandiswa kweWiFi Direct. Kunze kweMutengo, kune zvakawanda zvimwe zvingasarudzika zvakare zviripo. Sarudzo ndeyako, zvinoenderana neyako nyaradzo netiweji yeWiFi Direct inogoneswa nesarudzo yako.
Nekudaro, tambo yekuchinjisa dhata, kureva, iko kushandiswa kwedata tambo, hapana mubvunzo ndiyo inokurumidza nzira yekufambisa data, asi zvisina basa inosanganisira kuvimba pane Hardware. Kana iyo tambo yedata ikave yakashata kana ikaiswa zvisirizvo, iwe wakanamatira kudiwa kwekutamisa akakosha mafaera kana data.
Saka, apa ndipo apo WiFi Direct inowana pekutanga pamusoro peBluetooth, izvo zvinogona kutora anopfuura maawa maviri kana approx. Mazana zana nemakumi maviri nemashanu maminetsi ekuchinjisa 1.5 GB faira nepo WiFi Direct ichipedza basa rimwe chete mumaminitsi asingasviki gumi. Saka isu tinoona tichishandisa iyi isina waya yekuratidzira tekinoroji tinogona kuendesa odhiyo uye vhidhiyo kuratidza kubva kune mafoni, laptops, uye desktops kune makuru-screen monitors uye nezvimwe zvakawanda.
Yakurudzirwa: Mitemo yeWi-Fi Inotsanangurwa: 802.11ac, 802.11b / g / n, 802.11a
Kupedzisa hurukuro yangu, zvisinei neBluetooth yakabata nhare kubvira 1994, WiFi Direct, nekwaniso yayo yekuwana nekubatana nekukurumidza uye kuendesa data nekumhanyisa kumhanya uchienzaniswa nesvinga inononoka yeBluetooth, iri kuwedzera mukurumbira. Zvakafanana nenyaya yakakurumbira uye inoverengwa nekuverengwa yetsuro nekamba, kunze kwekunge Hare, ichienzaniswa neWiFi Direct, yakashandura pfungwa yekunonoka uye kutsiga inokunda mujaho mune ino nyaya.
windows 10 mic isiri kushanda mushure mekugadzirisa
Laptop inoramba ichienda kunorara mushure memaminetsi mashoma
google chrome kuburitsa cpu
kombiyuta inoparadzanisa kubva internet